Ny Firenena Mikambana Misahana ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Kolontsaina na UNESCO dia fikambanana iraisam-pirenena sampanan'ny Firenena Mikambana. Hoy ny UNESCO ny tanjona dia ny hanampy foana ny fiadanana sy ny filaminana. Tokony hanao izany amin'ny alalan'ny fifanampian'ny firenena, amin'ny alalan'ny fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina. Izany dia natao hanampiana ny firenena hafa hanaraka ny fanjakana tan-dalàna sy ny zon'olombelona. Manampy izany ihany koa mampirisika ny fahafahana sasany izay ao amin'ny Dinan'ny Firenena Mikambana.
18.733330°S 47.566670°E﻿ / -18.733330; 47.566670
Ambohimanga dia anisan'ny vohitra masina roa ambin'ny folo ao Imerina. Miala dimy ambin'ny folo kilometatra an'Antananarivo no misy azy. Toerana fonenan'ny mpanjaka sy ny mponina taloha amin'ny faritr'Imerina. Manana tantara sy tahiry maro io toerana io. Nanomboka tamin'ny taona 2001 dia toerana ao anatin'ny tahiry iraisam-pirenena UNESCO ity (UNESCO World Heritage Site). Misy ny rova azo tsidiana. Tao amin'io tanàna io no nahaterahan'Imboasalama izay lasa Andrianampoinimerina taty aoriana. Mifefy tamboho izay vita amin'ny akoran'atody io Rova io.
Ny mpanjaka Andriamasinavalona (1675-1710) izay fantatra amin'ny anarana Andrianjakanavalondambo, dia mpanjakan'Imerina. Nitondra fiovana lehibe tamin’ny lafiny ara-tsosialy, ara-politika ary ara-toe-karena tao Imerina ilay mpanjaka. Ny lehibe indrindra tamin’ny zavatra nentiny dia ny fanitarana ny tany anjakany ary ny fampiadanana ary fampiraisana ny tanin’andriana a izay raikitra tanaty ady ary herisetra. Antananarivo no anarana nomeny ny renivohiny ary niitatra avy teo amin’ny toerana nametrahany ny lapan’ny mpanjaka teo amin’ny vohitr’i Analamanga ny tanàna. Nitaky ny vohitra nomeny anarana ho Ambohimanga i Andriamasinavaloha ary napetrany tao ny zanany Andriantsimitoviaminandriana. Lasa Toeran-dova Eran-tany (World Heritage Site) an’i UNESCO ilay vohitr’Andriana.
Andro iraisam-pirenen'ny teny nibeazana
Ny andro iraisam-pirenen'ny teny nibeazana dia nambarain'i UNESCO ny 21 Febroary 2000, ary ankalazain'ny firenena mpikambana amin'io daty io mba hanohana ny fahasamihafana ara-piteny, ary ara-kolontsaina.
Ani (asomtavruli Endrika:Script, nuskhuri Endrika:Script, mkhedruli ა) is the 1st letter of the three Georgian scripts.Ao amin'ny rafi - zeorziana tarehimarika io dia manana ny lanjany 1.Ani matetika maneho ny hanokafana foibe unrounded zanatsoratra /a/, toy ny fanononana teny nyEndrika:Angle bracket ao amin'ny "fnyapokalypsy".
Ny Ankizy dia olombelona manana nofo sy ra, na vavy na lahy. Manomboka eo amin'ny fotoana nahaterahany hatramin'ny fahalebeazany no tena maha ankizy ny olombelona, izany hoe mifarana eo amin'ny faha 18 taona. Tezaina manaraka ny fitsipika apetraky ny Ray aman-dReny ny ankizy, ary beazina amin'ny fomba tsara sady modely izy.
Tokony manana zo feno ary voahaja ny ankizy rehetra.
Ny teny hoe ankehitriny indray (mikraoba. Staatliches ankehitriny indray dia na ny ankehitriny indray) dia manondro ny kanto sy ny architectural sekoly naorina tamin'ny Walter Gropius sy ny mandroso eo amin'ny vanim-potoana 1919-1933 tao Alemaina.
Ny fiteny bretona dia fiteny seltika tenenin'ny olona miisa 172 000 ao Britaina ao Frantsa tamin'ny taona 2009. Ao amin'ny vondrom-piteny seltika britonika ny fiteny bretona. Isan'ireo fiteny atahorana tsy hisy mpiteny intsony ny fiteny bretona araka ny tatitry ny UNESCO. Fiteny indo-eoropeana ny fiteny bretona.
Ny Fenitra Iraisam-pirenena Fanasokajiana ny Fanabeazana (ISCED, ahonternational Standard Classification ny Education) no namorona ny UNESCO ho an'ny fanasokajiana sy ny fanendrena ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana rafitra.
I Kapadokia na Kapadosa dia faritra ara-tantara tao Torkia izay hita tao amin'ny faritra afovoan'i Anatolia. Tamin'ny taona 1985 ny UNESCO dia nanoratra azy ho isan'ieo toerana arovana sy vakoka ho an'ny olombelona. Atao hoe Καππαδοκία / Kappadokia izy amin'ny teny grika ary Կապադովկիա amin'ny teny armeniana. Ny Torka dia miantso azy hoe Kapadokya.
Malacca, na Melaka amin'ny fiteny malay dia faritany mizaka tena fahatelo kely indrindra any Malaizia, eo aorian'i Perlis sy Penang, any atsimon'ny tanjona Malay no misy azy. Ny faritan'i Malacca dia mizara sisin-tany amin'ny faritan'i Johor any atsimo. Ny renivohiny dia Malacca, ny tanàna aloha dia voasokajin'i UNESCO ao amin'ny Fananan'ny Tontolo hatry ny 7 Jolay 2008.
Quebec dia tanàna renivohi-paritanin'i Quebec, anisan'ny faritany any atsinanan'i Kanada. Ny antenimieran'i Quebec dia mipetraka ao miaraka amin'ny akabeazan'ny fikambanam-paritany. Ny fivondronan'ny Vieux-Québas dia ao amin'ny lisitry ny Haren-tsaina izao tontolo izao an'ny UNESCO hatry ny 1985. Ny tanànan'i Quebec ihany koa ny tanàna voafefy any Amerika Avaratra.
Ny tanànan'i Quebec dia anisan'ny tanàna lehibe any atsinanan'i Quebec, eo anivon'ny toerana misy mipetraka any Quebec, eo amoron'ny Saint-Laurent. I Samuel de Champlain no namorona ilay tanàna tamin'ny 1608 ; ary izy no renivohitry ny Frantsa Vao, ny Kanada-Ambany, ary, nandritry ny taona fohy, renivohitry ny Kanada ; ny anarana hafa omena an'i Quebec dia « Vieille Capitale » (« Renivohitra Taloha »).
Hatry ny 2001, ny tanànan'i Quebec dia tanàna kanadianina anisan'ny mandroso indrindra eo aorian'ny Calgary, Edmonton sy Saskatoon. Vitsy dia vitsy ny isan'ny olona tsy miasa. Ny asa mivoatra dia ny biôteknôlôjia, ny taozava-baventy, ny fizahantany, ny siansa momban'ny fiainana, ny fahasalamana ary ny sakafo, ny toky sy ny teknôlôjia ampiasina. Izy koa seranana lehibe : ny seranany dia fahatelo any Kanada amin'ny resaka tonnage.
Tsingy na Tsingin'ny Bemaraha dia toerana any andrefan'ny nosy Madagasikara. Toerana atokana nohon'ny endriny sy ny zavatra misy ao aminy. Nanomboka tamin'ny taona 1990 dia tafiditra ao anatin'ny tahiry iraisam-pirenena UNESCO izy.